Kooxo Hubeysan oo Muqdisho ku dilay Askari ka tirsan ciidanka Ilaalada deegaanka – STAR FM SOMALIA
Kooxo Hubeysan oo Muqdisho ku dilay Askari ka tirsan ciidanka Ilaalada deegaanka
Kooxo Hubeysan ayaa xalay degmada Waabari ee magaalada Muqdisho ku dilay askari ka tirsan Ciidanka Ilaalada deegaanka ee loo yaqaano Munishiibiyo.
Wararka ayaa sheegaya in askariga la dilay lagu magacaabayay Mustaf Xaaji Dhicisow, waxaana la dilay isagoo ka soo baxay masaajid.
Kooxaha dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, waxaana mar dambe soo gaaray ciidamada ammaanka, kuwaasoo aan u suura gelin inay soo qabtaan kooxihii dilka ka dambeeyay.
Guddoomiyaha degmada Waabari Xaawo Kiin ayaa sheegtay inay wadaan baaritaano, ayna ku raad-joogaan kooxihii dilka ka dambeeyay.
Ciidamada Ilaalada deegaanka ee Munishiibiyo ayaa ka howl gala degmooyinka Gobolka Banaadir, iyagoo lacago canshuuro ah ka qaada goobaha ganacsiga.
Xoogag ka tirsan Shabaab oo gudaha u galay dalka Kenya
War murtiyeedkii laga soo saari lahaa Shirka Madasha Wada-tashiga oo dib u dhac ku yimid